छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य कहिले ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य कहिले ?
छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य कहिले ?
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय June 8, 2018	0 131 Views
अस् ितमात्रै जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइयो  । २०६३ जे ठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घो षणा गरे को दिनको सम्झनामा हरे क वर्ष जे ठ २१ म यो े दिवस मनाउने गरिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस् कृतिक, राजनीतिक तथा जातीय हिसाबले दलित समुदायमाथि भएका उत्पीडन अन्त्य गर्न सबै लाई प्रे रित गनेर् दिनको रुपमा यो दिनलाई लिने गरिए पनि व्यवहारमा दलित भएकै कारणले अने क खालका उत्पीडनको सामना गर्नु परिरहे को दे खिन्छ । दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले वक्तव्य जारी गरी उत्पीडनमा रहे का सम्पूर्ण समुदायमा जातीय समानता र सद्भावका लागि शुभकामना व्यक्त गदैर् जातीय भे दभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यको सामाजिक जागरण सिर्जना गर्न प्रे रणा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे का थिए । ने पाली समाजमा व्याप्त भे दभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न यो दिन सरकार प्रमुखले निश्चित यो जना तथा कार्यक्रम तय गरे र सार्वजनिक गर्नुपथ्योर् तर प्रधानमन्त्रीले कर्मकाण्डीरुपमा शुभकामना दिएर सदियौ ंदे खि दलितले भो ग्दै आएको उत्पीडनको संबो धन गरे  ।
दे शमा जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको तयारी गरिरहँदा कालीको टमा एकजना दलित महिला कुटपिटबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भइन् । उनी कालीको ट नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट निर्वाचित दलित महिला सदस् य थिइन् । त्यस् तै के ही दिन पहिले झापामा संस् कृत विश्वविद्यालयमा प्रवे श निषे ध गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो  । अस् ित मात्रै अकोर् समाचार सार्वजनिक भएको छ । नवलपरासीमा एक मुसहर महिलालाई वलि दिने प्रयास गरिएको छ । स् थानीय एक बो र्डिङ स् कूलका प्रिन्सिपलले उनलाई वलि दिने तयारी गदैर् गर्दा उनी भागे र ज्यान जो गाउन सफल भएकी छन् । कालीको टको घटनामा मुद्दा दर्ता भई आरो पितहरु प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने नवलपरासीको घटनामा प्रहरीकै रो हवरमा घटनामा मिलापत्र समे त गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि मारिनु, शिक्षक नै वलि दिने काममा अग्रसर हुनु र कानुनी राज्य स् थापना गर्न अगुवाइ गर्नुपनेर् निकाय प्रहरीले आपराधिक घटनामा समे त मिलापत्र गराएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको जस् ता कुराले ने पाली समाज र राज्यको चरित्र र अवस् था बुझ्न मद्दत गर्छ । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । अन्तर्जातीय विवाह, छुवाछुत, धर्म, परम्परा र संस् कारका नाममा हुने अमानवीय व्यवहारबाट जातीय हिसाबले दलित, लिङ्गीय हिसाबले महिलाले अने कन पीडा भो ग्दै आएका छन् । यही महिना सार्वजनिक भएका तीन दृष्टान्तले महिलाबिरुद्ध भइरहे को हिंसा, समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र जातीय विभे द तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न अझ धे रै काम गर्न बाँकी रहे को पुष्टि गर्छ ।
जातीय विभे द गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो र यो दलितको मात्र नभएर सबै को सरो कारको विषय हो  । हाम्रो संवै धानिक तथा कानुनी व्यवस् थामा जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने संकल्प छ । सरकारले जातीय भे दभाव तथा छुवाछुतमुक्त दे श नै घो षणा गरिसके को अवस् था छ । तर समाजमा हे नेर् हो भने छुवाछुत भो ग्नुपनेर् मात्र हो इन, दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनुपनेर् अवस् था छ । यसले संविधानमा ले ख्दै मा, कानून बनाउँदै मा अन्धविश्वास, भे दभाव र छुवाछुत हट्ने कुरा हो इन भन्ने बुझाउँछ । मुक्त घो षणा गदैर् मा उत्पीडन हट्ने हुँदो रै नछ भन्ने नै दे खाउँछ । संविधान कानूनमा व्यवस् था हुनुको महत्व सानो हो इन, तर ती कार्यान्वयनमा आएनन् भने हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदै न भन्ने हो  । त्यसै ले जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीको वक्तब्य कार्ययो जना बने र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सामाजिक जागरण, सामाजिक सद्भाव यत्तिकै हासिल हुने उपलब्धि हो इनन् । सचे तनाका नाममा भइरहे का अभियान सस् तो लो कप्रियता र औ पचारिकता पूरा गर्नमा सीमित छन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ । ने पाली समाजलाई प्रगतिपथमा लम्किन नदिन हामीले पाले का कुसंस् कार, अमानवीय व्यवहार, अने क नाममा गरिने भे दभाव दो षी छन् । यी दो ष फाल्न सरकारको मात्र भर परे र हुँदै न, हरे क सचे त नागरिकले आफै बाट शुरु गर्नुपर्छ । तर सरकारले प्रभावकारीरुपमा कदम चाल्नै पर्छ । यी दो षबाट मुक्त नहुँदै सरकारको समृद्धिको कुरा आकाशको फलमात्रै हुने छ ।
Previous: ‘क’ नचिनेका कर्णालीवासीको कथा
Next: चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेटको खोलबाट ढकिया !